सार्वजनिक बसमै एक जोडी यस्तो अवस्थामा भेटिए, भिडियो बन्यो एकाएक भा’इरल - Alert Khabar
Homeमनोरञ्जनसार्वजनिक बसमै एक जोडी यस्तो अवस्थामा भेटिए, भिडियो बन्यो एकाएक भा’इरल
एजेन्सी । बेलाबखत सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न फण्डाहरु आइरहन्छन् । विभिन्न का’ण्डका समाचारहरु पनि सा’र्वजनिक भएकै हुन् । हाल फेरि सामाजिक सञ्जालमा एउटा यस्तै का’ण्ड भाइ’र’ल बनेको छ । सार्वजनिक बसमा एक जोडीले गरेको हर्कत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको हो । बसभित्रै चुम्बन गरिरहेका एक प्रेम जोडीको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको हो । घ’टना दिल्लीको हो । दिल्ली मेट्रोमा एक प्रेम जोडी एकआपसमा चुम्बनमा रमाइरहेको देख्न सकिन्छ । भिडियो सोही मेट्रोमा रहेकामध्ये एक जनाले उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
त्यस्तै यदि तपाईं अस्पतालमा भर्ना हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई कुनै चोट लागेको हुनसक्ने वा बिरामी भएको हुनसक्ने संकेत दिन्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंलाई भेट्न आउने कोही पनि व्यक्तिले तपाईंलाई उत्कृष्ट देख्ने आशा राखेका हुँदैनन् । यद्यपि, भियतनामकी एक युवतीले भने अस्पतालमा भर्ना हुँदा पनि प्रेमीले उनलाई मेकअप बिना नदेखुन् भनेर हतारहतार मेकअप गरेकी छिन् । चाइना प्रेसका अनुसार वाङ्गमेइ अस्पतालमा प्रेमी भेट्न आउने खबर सुनेर यति उत्साहित भइन् कि उनले फेसबुकमा निकै खुसी हुँदै क्याप्सन लेखिन्, ‘मेरा प्रेमी मलाई भेट्न आउँदैछन् !’
प्रेमीले आफूलाई कमजोर नदेखोस् भन्ने उद्देश्यले उनले तत्काल बेस मेकअप, आइब्रो, ब्लसर, आई स्याडो, आई लाइनर लगाइन् साथै झुम्कासहित नङमा पालिससमेत लगाइन् । रेस्पिरेटर राखिएको उनको अनुहारमा मेकअप निकै उत्कृष्ट देखिएको थियो तर यस्तो अवस्थामा पनि हेभी मेकअप गरेको भन्दै धेरैले उनको आलोचना गरे ।
उनले आफू सुन्दर छु भनेर देखाउन यतिसम्म पनि गर्न नपर्ने धेरैले बताएका छन् । उनको झुम्कामाथि पनि धेरैले प्रतिक्रिया दिँदै मानिसहरुले उनलाई बिरामीजस्तो नदेखिएको बताएका छन् । कतिले भने प्रेमीले चिन्ता लिने हुन् कि भनेर वाङ्मेयीले यस्तो गरेको हुनसक्ने बताउँदै उनको समर्थन पनि गरेका छन् ।
त्यस्तै बलिउडका चर्चित नायक सलमान खानका पारखीका लागि उनको चर्चित ब्राण्ड नेपालको बिइङ ह्युमनक्लोथिङको ‘रिब्रान्डिङ’ गरिएको शो–रुम दरबारमार्गमा खुलेको छ । नेपालका लागि बिइङ ह्युमनक्लोथिङको आधिकारिक बिक्रेता वस्त्र इन्क प्रालीले दरबारमार्गको स्टोरमा संस्थापक सलमानखानको जन्मदिनका अवसरमा ‘रिब्रान्डिङ’ हुरु गरेको कम्पनीले आज (आइतबार) विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
केही समय आन्तरिक समस्याका कारण बन्द रहेको उक्त शो–रुम औपचारिकरुपमा पुनःसञ्चालनमा आएको हो । विभिन्न देशमा रहेका बिइङ ह्युमनक्लोथिङको ‘शो–रुम’ मा सलमानखानको ५४औँ जन्मोत्सव भव्यताका साथ मनाइको र नेपालमा पनि खानको जन्मदिन मनाइएको थियो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदीपचन्द्र बख्रेलले मानवताको भावनाअनुरुप गरीब तथा विपन्न नागरिकलाई रोजगारीको सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित कम्पनी शुरु गरिएको बताए ।
उनले भने, “सलमानखान फिल्म मात्र होइन, वास्तविक जीवनमा पनि हिरो बन्न सफल हुनुभएको छ, बलिउड सुपर स्टारभन्दा पनि सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय बिइङ ह्युमन फाउण्डेसनका संस्थापकका रुपमा जन्मदिन मनाएका हौँ ।
बलिउड उद्योगमा हुने हरेक घटनाको बारेमा जान्नका लागि दुनियाँ सधैं अग्रसर रहन्छ । बलिउका फिल्महरु, कलाकार र कलाकारसँग सम्बन्धित हरेक कुरा मानिसहरु चाख मानेर पढ्ने, सुन्ने र हेर्ने गर्छन् । प्रायःजसो कलाकारका व्यक्तिगत जीवनको विषयमा मानिसहरुको रुची धेरै पाइन्छ । उनीहरुको वास्तविक जीवनशैली, सम्बन्ध र आचरण कस्तो होला भन्ने धेरैलाई चासो लाग्छ ।
हरेक व्यक्तिमा राम्रो र नराम्रो गुण त अवस्य नै हुन्छन् । मान्छे आफूलाई अरुसामु कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हुनेगर्छ । यसैबीच आज हामी बलिउडका घमण्डी कलाकारका विषयमा केही किस्सा बताउँन लागेका छौं । जो सधै खराब व्यवहारका कारण चर्चामा आइरहन्छन् ।
जया बच्चन अर्थात बउिडका महानायककी श्रीमती, अभिनेत्री तथा सांसद । उनका पछिल्ला दिनहरुमा बारम्बार रिसाएका भिडियोहरु भाइरल भइरहन्छन् । उनी कहिले फोटोग्राफरलाई गाली गरिरहेकी भेटिन्छिन् त कहिले फोटो खिचेकोमा आपत्ति जनाइरहेकी हुन्छिन् । अर्की अभिनेत्री हुन् । साथै उनै जया बच्चनकी बुहारी अभिषेक बच्चनकी श्रीमती ऐश्वर्या राय । सुन्दरताकी खानी राय खराब आचरण भएकी अभिनेत्रीमा गनिन्छिन् ।
उनलाई रिसाहा अभिनेत्री पनि भनिन्छ । उनी आफ्नै को–स्टारसँग पनि राम्रो व्यवहार नगर्ने, मिडिया र मानिसहरुको खिल्ली उडाउने गर्छिन् । यसै सूचिमा सुचिकृत भएका अर्का अभिनेता हुन् ऋषि कपूर । भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख भए अनुसार उनीसँग रिसको पुरानो नाता नै छ ।
रिलमा रोमान्समा मग्न हुने शाहरुख कति घमण्डी र रिसाहा होलान् ? या नहोलान् ? देख्दा रोमान्टिक देखिने शाहरुख खान आफ्ना समकक्षीसँग झगडा गर्नमा पोख्त छन् । उनको बलिउडका थुप्रै कलाकारसँग दुश्मनी छ । उनी धेरै नै रिसाहा छन् । सलमान खानलाई घमण्डी छैनन् भन्ने त कमै भेटिन्छन् ।
उनले सञ्चालन गर्ने रियालिटी शोहरुबाट पनि उनको व्यवहार त सजिल्यै चिन्न सकिन्छ । उनले विवेक ओबरायको करियर नै भताभुङ्ग बनाइदिए । प्रायः बलिउडका कलाकार उनीसँग मुकाबिला गर्न डराउँछन् । कट्रिना कैफ आफ्ना दर्शकसँग राम्रो तरिकारले प्रस्तुत हुन सक्दिनन् ।
उनले एक पटक बच्चा फ्यानले अटोग्राफ माग्दा उनले ती बच्चालाई सुटिङबाट बाहिर निकालिदिएकी थिइन् । करीना कपूर, सोनम कपूर र अनुष्का शर्मा पनि यो सूचिमा पर्छन् । करीनाको एकदमै रुखो छ व्यवहार भने उनको अरुला